Colour painting and Color palette makers Mayelana NATHI – Umbala Picker Ovela Kusithombe
Mayelana NATHI – Umbala Picker Ovela Kusithombe
I-Bridgegalleryny.com iyiwebhusayithi elungiselelwe nina enifuna ukusizakala ngesikhethi sombala kusuka esithombeni, isikhethi sombala we-RGB, isikhethi sombala we-chrome, isikhethi sombala wesithombe, isikhethi sombala we-chrome, isikhethi se-adobe, okhetha umbala we-html ukusetshenziswa okuningi okuningi kwale webhusayithi.
I- Bridgegalleryny.com ilusizo kakhulu kini enisebenza njengabaklami bemibala, abadwebi, abahumushi bemibala, abahloli bemibala ye-android, abenzi bewebhu kanye nabaqambi, abahlobisi bekamelo, abakhi bezakhiwo nobunye ubuchwepheshe obuningi abangasebenzisa le webhusayithi.
Le webhusayithi ye-golggnyny.com ingachaza ngokuningiliziwe zonke izinto zombala eziqukethwe esithombeni, kufaka phakathi ukulandelana kombala okuvelele, imibala yesampula, imibala ye-hex, imibala ye-RGB, namagama wemibala agcwele futhi aphelele.
Uma udala ikhasi lewebhu noma ibhulogi noma njengebhulogi eliqeqeshiwe noma elinamaqiniso, ngineqiniso ukuthi kuzoba nzima kakhulu ukuhlukana nombala we-hexadecimal noma we-hex. Ngoba le hex yombala isetshenziswa kabanzi ukwenza izinhlobo ezahlukahlukene zemibala kuwebhu.
Kusho ukuthini Hex Colour?
Umbala we-Hex empeleni awusiwona umbala kepha kungenye yezindlela zokubhala amakhodi wombala phakathi kwezinye izinhlobo zokufaka imibala, njenge-RGB, i-HTML, noma ezinye izinto. Ngakho-ke ibizwa nge-Hexa Colour Code, noma isifinyezo njenge-Hexa Code noma i-Hexa Coor noma i-Hex Colour.
Ukubhala kusebenzisa izinombolo kusuka ezinombolweni ku-0 kuye ku-9 nezinhlamvu (kusuka ku-A kuye ku-F), inani lamakhodi liqukethe izinhlamvu ezi-6, kungaba nezinombolo noma izinhlamvu kuphela, noma inhlanganisela yezinombolo nezinhlamvu. Bese kuthi njengophawu phambi kwakhe usebenzisa uthango ekuqaleni.
# 000000 (izinombolo kuphela)
#FFFFFF (izinhlamvu kuphela)
# FF0000 (izinombolo nezinhlamvu kuhlangene)
Ngaphezu kwalokho, uma usezweni lomdwebo wokuqhafaza nokuphrinta, kufanele ujwayele igama elithi RGB umbala, okuhloswe ngalo ukubonakala kwedijithali noma ukuboniswa kwedijithali.
Kusho ukuthini ngombala we-RGB ???
I-RGB imele i- “Red-Green-Blue” iyimodeli yokukhanya kombala (imodi yokufakelwa kombala) esetshenziselwa amadivaysi wokufaka njengemishini yesithwebuli namadivayisi wokukhipha njengokubonisa kokubonisa, imibala eyinhloko (Ubomvu, Oluhlaza okwesibhakabhaka) Ngokuya ngobuchwepheshe be idivaysi esetshenziswe njenge-CCD noma i-PMT kwisithwebuli noma ikhamera yedijithali, i-CRT noma i-LCD esibukweni sokuqapha.
Lapho (i-Red-Blue-Green) imibala emithathu ihlanganiswa ukuze ibe mhlophe, futhi yingakho i-RGB ibizwa ngokuthi I-Additive Colour noma eminye imibala yokukhanya kolimi. Umbala we-RGB umgomo wombala osetshenziswa imidiya ye-elekthronikhi efana namathelevishini, ama-computer aqapha kanye nezikena. Ngakho-ke, imibala ekhonjiswa i-RGB ihlala igqamile futhi imnandi, ngoba ihlelwe ngendlela yokuthi kuqashwe ukuboniswa, hhayi ukuphrinta ukuze ikhululeke kakhulu ukudlala ngemibala. Kodwa lokho akusho ukuthi i-RGB ayinankinga ngoba isibonisi sombala se-RGB siyohlala siboshelwe emandleni / kwikhono lemifanekiso ye-computer eyiphethe. Ngakho-ke uma ikhompiyutha esiyisebenzisayo inekhadi elihle lokuqhafaza ne-LCD track, ukuboniswa kombala we-RGB kuzoba ngcono kakhulu kunesibuko se-tube enekhadi lehluzo elijwayelekile.
Kokulandelayo, ngizochaza izindlela okufanele uzisebenzise ukusebenzisa okokukhipha imibala osuka esithombeni ngale ndlela elandelayo:
1. Chofoza u- “Khetha isithombe sakho” bese ukhetha isithombe ofuna ukusazi ikhodi yombala bese usilayisha.
2. Thayipha igama lesithombe kwikholamu engenalutho, ngemuva kokuthi “Faka igama lesithombe”
3. Bese uqhafaza u- “Thumela”
Ngemuva kwalokho ukulandelana kwemibala okuvelele, izibonelo zemibala, imibala ye-hex, imibala ye-RGB, kanye nemibala yemibala iphelele futhi igcwele etafuleni.
Kanjani?? Kulula, kunjalo?
Sicela uzame ukulayisha izithombe eziningi njengoba unazo. Futhi bheka imiphumela yokuhlanganiswa kombala okhiqizwe etafuleni. Isithombe osilayishile sizokhombisa yonke imibala evelele, umbala we-hex, umbala we-RGB, negama lombala.
This "Mayelana NATHI – Umbala Picker Ovela Kusithombe" graphic has 20 dominated colors, which include . It makes so beautiful color combination inspired from this image.